Bankiga Premier oo markii ugu horeysay Soomaaliya ka hirgeliyay adeegga ganacsi ee LC (Sawiro) | Jowhar Somali News Leader
Bankiga Premier oo markii ugu horeysay Soomaaliya ka hirgeliyay adeegga ganacsi ee LC (Sawiro)
Habkan ayaa ah mid ka saacidaya shirkadaha ganacsiga ee maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba in ay badeecooyinkooda si sahlan oo damaanad leh u kala iibsadaan iyadoo qolo kasta goobteeda ku sugan tahay.
Nidaamkan maanta la soo bandhigay ayaa waxa uu dhexeeyaa Bangiga premier ee Somalia iyo Bangiyada dalka Masar.
Munaasabad ballaaran oo lagu daah furayey adeegga LC ee Prermier Bank, ayaa maanta ka dhacday gudaha dekedda Muqdisho, waxaana kasoo qayb galay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, xubno ka socdey safaaradda Masar ee Muqdisho, Madaxda Bankiga Premier iyo wakiillo kala metelayey shirkadaha ganacsiga.
Wasiiradda Ganacsiga ee Soomaaliya Khadro Ducaale oo ugu horreyn goobta ka hadashay ayaa ku tilmaantay arrintan tallaabo muhiim ah oo horay loo qaadey iyadoo uga mahadcelisey Bankiga Premier soo kordhinta adeegga LC iyo dhammaan adeegyada kale ee muhiim ah ee uu waddanka kusoo kordhiyey.
“Dowladda Masar iyo Premier Bankgiba aad baan ugu mahadnaqayaa. Dowladdu aad bay uga shaqeysey in wadanka la horumariyo wax ka wanaagsan ma jiraan in ganacsatada la taageero oo ay waddanka ka shaqeystaan oo ay maalgashi sameystaan oo ay xataa dibada ka adeegtaan wax ka wanaagsan ma jirto”
Madaxa Maalgelinta ee Bankiga Premier Axmed-nuur Maxamed Cabdi oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay dadaal dheer ku bixiyeen sidii habkan looga dhaqan gelin lahaa Soomaaliya, isagoo u mahadceliyey cid kasta oo howshaas gacan ka geysatey.
“Barnaamijkan maanta guusha ah oo ah LCgii ugu horreeyey ee Soomaaliya laga furo kadib burburkii 1990kii…LCgaan oo Bankiga Premier uu u furay shirkaddan oo la yiraahdo IMPO oo ah shirkad daawada keenta waxa uu ku dhammaaday si guul ah Premier Bank ayaana sameeyey. Waxan u mahad celineynaa cid kasta oo howshan kasoo qayb qaadatay”
Sidoo kale, mas’uuliyiintii munaasabadda daahfurka adeegga LC [letter of credit] ka hadlay waxaa kamid ahaa, Qunsulka Safaaradda Masar ee Muqdisho Taamir Safwat maadaama adeegga LC ay Bankiga Premier ka wada shaqeyn doonaan qaar kamid ah bankiyada dalka Masar.
“Maanta waxaan goobjoog ka ahay dhacdo muhiim u ah xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan dhanka xiriirka ganacsiga. Xilliyadii hore dhibaatooyin baa ka jirey dhanka xiriirka ganacsiga ee labada dal, ganacsatada Masaarida dhib bay ku ahayd inay wax usoo dhoofiyaan halkan maadaama Soomaaliya aysan lahayn nidaam bangi oo si wanaagsan u shaqeynaya. Ganacsatada Masaarida waxaa dhib ku ahayd inay bangiyada Soomaaliya ka helaan waraaqaha LCga. Alxamdulilaah maanta waxan u joognaa dhacdo muhiim ah, taasoo ah miradhalka dadaal dheer oo lasoo galay. Waan u mahadcelinayaa cid kasta oo howshan ka qayb qaadatay gaar ahaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wax badan nala fududeeyey iyo madaxda wasaaradda ganacsiga”
Adeega LCga ayaa waxa uu ka mid ahaa adeegyada aan ka jirin soomaaliya sanadihii la soo dhaafay . Bankiga premier ayaan noqday bangigii ugu horreeyay ee soo nooleeya adeeggan muhiimka u ah gancsatada Soomaaliyeed.
Sawirada furitaanka Nidaamka LC ee Premier
Previous articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo xalay kormeeray qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada magaalada Muqdisho
Next articleBam gacmeed lagu weeraray ciidamo magaalada Boosaaso